(Dhegayso) Danjiraha Soomaaliya ee Qaramada Midoobay Oo Ka Hadlay Deynta Lagu Leeyahay Soomaaliya | puntlandi.com
(Dhegayso) Danjiraha Soomaaliya ee Qaramada Midoobay Oo Ka Hadlay Deynta Lagu Leeyahay Soomaaliya
Danjiraha Soomaaliya ee Qaramada Midoobay Abuukar Daahir Cismaan ayaa ka hadlay deynta beeniyay warar ay warbaahintu qoraysay 24-saac ee lasoo dhaafay, kaasoo ku saabsan in Soomaaliya loo diidayo inay cod ku yeelato shirka Qaramada Midoobay.
Warbaahinta oo xiganaysay Qoraal lagu daababay bogga Qaramada Midoobay, ayaa lagu sheegay in dalalka lagu leeyahay lacagta qaaraanka ah ee Qaramada Midoobay oo ay Soomaaliya qeyb ka tahay waayidoonaan xaqqii uu ay lahaayeen inay codeeyaan, haddii dalalkaasi aysan la iman sabab macquula oo keentay inay lacagta iska bixin kari waayaan, isla markaana golaha Sare uu ku qanco.
Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay Abuukar Daahir Cismaan oo la hadlay VOA ayaa sheegay sheegay inay jirto in Somalia lagu leeyahay lacagihii qaadhaanka ahaa ee dal ahaan looga rabay, taas oo aan 15-kii sano ee ugu dambeeyey aan la bixinin.
Danjiraha ayaa sheegay inay sannad walba codsanayeen in dib loo dhigo bixinta lacagtaas, sannadkanna ay sidaas sameeyeen.
Danjiraha ayaa meesha ka saaray islamarkaana been abuur ku tilmaamay in loo diiday Soomaaliya in ay golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay ka hadlaan ama cod ku dhex yeeshaan.
Halkaan ka dhegayso codka danjiraha.